ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिनसक्ने चेतावनी दिँदै डा. फौसीले भने : खोप लगाएकाहरु पनि सचेत बनौं – Health Post Nepal
ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिनसक्ने चेतावनी दिँदै डा. फौसीले भने : खोप लगाएकाहरु पनि सचेत बनौं
२०७८ पुष ५ गते ७:५६
काठमाडौं – अमेरिकाका शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फौसीले क्रिसमसको समयमा हुने यात्राले कोभिड-१९ को नयाँ संस्करण ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले संक्रमण खोपको पूर्णमात्रा लगाएकाहरुमा समेत देखिने बताएका छन्।
उनले एक टेलिभिजनमा बोल्दै भने, ‘त्यसमा कुनै शंका छैन कि, ओमिक्रोनमा फैलनसक्ने असाधारण क्षमता छ।’ महामारीका बारेमा अमेरिकी सरकारलाई सल्लाह दिने डा. फौसीले यो भेरियन्ट विश्वभरि उग्र भइसकेको बताए।
यो द्रुत रूपमा उत्परिवर्तन गर्ने भिन्नता फैलिरहेको बेला, धेरै देशहरूले कडा कदम चालिरहेका छन्। युरोपमा फ्रान्स र जर्मनीले यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने नेदरल्यान्ड्सले क्रिसमसका बेला कडा लकडाउन लगाएको छ।
धेरै देशका सरकारहरूले आफ्नो कोभिड बुस्टर खोप कार्यक्रमलाई बढाइरहेका छन् किनभने अन्वेषकहरूले भनेका छन् कि, बुस्टर डोजले गम्भीर बनाउनबाट ८५ प्रतिशत रोक्न सक्छ।
डा. फौसीले अमेरिकामा द्रुत रूपमा फैलिरहेको ओमिक्रोन संक्रमणले देशभरको स्वास्थ्य प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी पनि दिए। ‘अहिले जस्तो अवस्था देखिन्छ, त्यस्तै भइरह्यो भने हाम्रा अस्पतालहरूमा तनावको अवस्था सिर्जना हुनेछ’, उनले चेतावनी दिँदै भने।
उनले मानिसहरूलाई फेस मास्क लगाउन र सामाजिक दूरी जस्ता सावधानी अपनाउनु आग्रह गरे। साथै अमेरिकीहरूलाई खोप र बुस्टर डोज लिन पनिअपिल गरे। उनले भने, ‘भ्याक्सिन र बुस्टर डोज पाएका व्यक्ति र खोप नपाएको व्यक्तिमा संक्रमणको गम्भीरतामा ठूलो भिन्नता छ।’